लगानी | गृहपृष्ठ | Page 4
जेठ ८, काठमाडौं (अस) । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले चालू आवको तेस्रो त्रैमासमा रू. १ अर्ब ३४ करोड बीमा शुल...
जेठ ८, काठमाडौं (अस) । युनिलिभर नेपाल लिमिटेडका कम्पनी सचिवले राजीनामा दिएका छन् । कम्पनी सचिव सोनम श्रेष्ठले...
जेठ ८, काठमाडौं (अस) । नेप्सेले हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेडको पहिलो कारोबारको लागि रू. ९८ दशमलव ३६ देखी...
स्पर्स लघुवित्तको नयाँ सञ्चालकमा को चयन भए ?
जेठ ७, काठमाडौं (अस) । स्पर्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सञ्चालकमा जनता बैंक नेपालको तर्फबाट क्षितिज खड...
लक्ष्मी बैंकको ९ लाखभन्दा बढी संस्थापक शेयर सर्वसाधारणमा परिणत
जेठ ७, काठमाडौं (अस) । लक्ष्मी बैंक लिमिटेडले शेयर स्वामित्व संरचना परिवर्तन गरेको छ । कम्पनीले संस्थापकतर्फ ५...
अनलाइन कारोबारमा बिहीवारदेखि बैंक इन्ट्रीगेसनको शुरुवात
जेठ ७, काठमाडौं (अस) । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले विकास गरेको अनलाइन शेयर कारोबार प्रणालीमा बिहीवारदेखि...
नेप्सेमा कालिका लघुवित्तको कारोबार रोक्का
on: ६ जेष्ठ २०७६, सोमबार १२:०२ लगानी
जेठ ६, काठमाडौं (अस) । नेप्सेमा कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर कारोबार रोक्का भएको छ । कालिका लघुवित्त र जनसेवी लघुवित्तबीच एक आपसमा मर्जरमा जाने सहमति भएकाले कारोबार रोक्का भएको हो ।...	बिस्तृतमा
हिमाल दोलखा हाईड्रोपावरको आईपीओ जेठ १४ देखि विक्री खुला
on: ६ जेष्ठ २०७६, सोमबार ११:५५ लगानी
जेठ ६, काठमाडौं (अस) । हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनीले जेठ ४ गतेदेखि १६ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आयोजना अति प्रभावित क्षेत्र इलाम जिल्लाको इलाम नगरपालिका वडा न ९, १...	बिस्तृतमा
काबेली विकासका शेयरधनीको हितग्राही खातामा बोनस शेयर जम्मा, कति प्रतिशत ?
on: ६ जेष्ठ २०७६, सोमबार ११:३२ लगानी
जेठ ६, काठमाडौं (अस) । काबेली विकास बैंकका शेयरधनीको हितग्राही खातामा बोनस शेयर जम्मा भएको छ । बैंकको २०७५ पुस २८ गते सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाबाट पारित ३५ प्रतिशत बोनस जम्मा भएको हो । पुस...	बिस्तृतमा
दुई कम्पनीको हकप्रद शेयर आउँदै, सेबोनमा स्वीकृत
on: ६ जेष्ठ २०७६, सोमबार १०:५३ लगानी